Iphupha likaFisherman-Rainbow Trout Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGilbert
I-Rainbow Trout Cottage likhaya elitsha eliqhelekileyo, i-w / intaba yokujonga, zonke iimpahla ezintsha, i-BBQ grill entsha, kwaye ifanelekile kubalobi beempukane, abazingeli, izibini kunye nabo bafuna ikhefu kwisiphithiphithi. Le ndlu yangasese isisiseko esigqibeleleyo sazo zonke ii-adventures, ukubona, kunye nayo yonke into iMadison Valley enokubonelela ngayo, kubandakanya i-Yellowstone National Park emalunga neyure enye. I-cottage ihamba umgama ukuya edolophini e-Ennis, iindawo zokutyela, imivalo, iivenkile zokubhabha kunye nokuthenga.
Ifumaneka e-Ennis, eyidolophu yaseNtshona yexesha elilungileyo, egcwele amakhwenkwe eenkomo, abalobi kunye nabazolonwabo bangaphandle. Uyonwabela yonke i-cottage kunye neyadi ebiyelweyo. Ikhaya lineplani yomgangatho ovulekileyo, amagumbi okulala ama-2 abanzi aneebhedi ezintsha, ezitofotofo zenkumbulo, amagumbi okuhlambela ayi-2 kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Ikhaya lisanda kwakhiwa kwaye linazo zonke izinto ezintsha kunye nezixhobo ezitsha.
I-Rainbow Trout Cottage ikwindawo entsha yokuhlala, umgama omfutshane wemizuzu emi-4 ukuya edolophini e-Ennis.
Umbuki zindwendwe ngu- Gilbert
Nangona ixesha elininzi andiyi kuba se-Ennis ngokwenyama ngexesha lokuhlala kwakho, ndinenethiwekhi yabantu abanokukunceda kuyo nayiphi na imiba enokuthi ivele. Ndihlala ndifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi.